Diblumaasiyadda - Sabahionline.com
2015-01-26 Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdoğan ayaa xariga ka jaray qaybta cusub ee dhawaan la casriyeeyay ee madaarka Muqdisho iyo Isbitaal isaga loogu magac-daray, waxna uu ballan-qaaday in uu sii wadi doono taageerada uu siiyo Soomaaliya.
Soomaalida oo isla qiray fursadaha iyo caqabadaha hor yaal danjirahooda cusub ee Marykanka
2014-07-23 Inkasta oo ay dad badani u arkaan magacaabidda danjiraha cusub ee Soomaaliya u fariisanaya Washington kadib muddo ka badan labaatan sano tallaabo wanaagsan oo horay loo qaaday, haddana qaddiyadda helitaanka lacagta asaasiga ah ee loo baahan yahay ayaa loo arkaa caqabad wayn oo hortaal.
Danjire Nuur: Kenya waa in ay raalli-galin ka bixisaa xadhigga diblomaasiga Soomaaliyeed
2014-04-30 Danjiraha Soomaaliya u jooga Kenya Maxamed Cali Nuur ayaa sheegay in hawgalka ammaanka ah ee Kenya ay waddo uu wax u dhimayo xidhiidhka ka dhexeeya Muqdisho iyo Nairobi.
Isbaheeysiga Kenya-Ugandha-Rwanda oo halis ku ah in ay jabiyaan Bulshada Bariga Afrika
2014-01-21 Huwanta saddex-geesoodka ah ayaa gaaray heshiisyo waaweeyn oo la xiriira qaddiyadaha is-dhex-galka iyada oo ayan arrinka ku wehelin xubnaha kale ee Bulshada Bariga Afrika ee Tansaaniya iyo Burundi, tallaabadaas oo ay falanqeeyayaashu ku sheegeen in ay kala furfuri karto midnimada ururka.
U kuurgalayaasha oo codsanaya xal nabad ah oo ku aadan is-afgaranwaaga Jasiirada Migingo
2013-07-16 Xaaladii foosha xumayd ee June 30-keedii ayaa sii hurisay khilaafka u dhaxeeya Kenya iyo Ugaandha ee ku aaddan Jasiiradda Migingo iyo jilaabashada kaluunka Nile ee qiimaha badan.
Milatariga Soomaaliya oo kaalmo ka helaya xulafada Bariga Afrika iyo Bariga Dhexe
2013-06-17 Masar ayaa ugu dambaysay saaxiib ballan ku qaada in uu caawinayo dib u dhiska kaabayaasha militariga Soomaaliya iyo ciidamada hubaysan, iyada oo [Soomaaliya] ay u dhaqaaqayso daganaasho aad u sareysa.
2013-05-23 Xiriirka diblumaasiyadeed ee u dhexeeya labada dal ayaa fowdo galay ka dib xukunkii laba Iiraaniyiin ah oo lagu tuhunsanaa in ay weerarro argaggixiso ka qorshaynayeen Kenya.
2013-05-14 Dawladda Soomaaliya ayaa isku dayaysa in ay samyso hadaf diblomaasiyadeed oo adduunka oo dhan ah si ay bannaanka u soo dhigto siyaasadaheeda dhaqaalaha iyo horumarinta baniiaadamka.
Wasiiradda Arimaha Dibadda Soomaaliya Aadan: Soomaaliya waxa ay u furantahay ganacsi
2013-05-06 Wasiiradda ayaa Sabahi u sheegtay in Beesha Caalamku ay tahay in ay sii waddo taageeradeeda Soomaaliya si loosii dhiso horumarka illaa iyo haatan la sameeyay, si buuxdana loo xaqiijiyo rajadeeda dhaqaale.
Jaamacadda Carabta oo ku dhawaaqday taageeraheeda Soomaaliya
2013-04-01 Markuu dhammaanayey shir-madaxeedkiisii 24-aad, ayay Jaamacadda Carabta ugu baaqday dunida Carabta iyo waddamada kale inay Soomaaliya ka taageeraan dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha iyo farsamada si ay uga caawiyaan dib-u-dhiska.
Tansaaniya iyo Shiinaha oo kala saxiixday qorshe horumarin deked ah
2013-03-27 Xiligii uu madaxweynaha Shiinaha booqday Tansaaniya, labada madaxwayne waxay saxiixeen 19 iskaashi oo waddada u xaadhayay dhisitaanka deked casri ah oo laga dhisayo Bogamoyo iyo mashaariic kale oo kaabiyayaal ah.
Booqashada Maxamuud ee Mareykanka oo iridaha u furaysa guulo diblumaasiyadeed oo dheeri ah
2013-01-21 Madaxda Soomaalida iyo hoggaamiyayaasha bulshada rayidka ayaa sheegaya in aqoonsiga Washington ee Soomaaliya ay kaalmo u tahay dimuqraadiyadda soo koraysa ee dalka.
Dawladda Soomaaliya oo doonaysa in ay dib u hanato hantidii dibadda
2013-01-02 Wasiirka Arrimaha Dibadda Fawsiyo Yuusuf Xaaji oo qorshaynaysa in ay u safarto dhawr waddan oo dibadda ah si ay u diiwaan galiso hantida dawladda ee dhuntay illaa iyo wakhtigii ay dawladdii dhexe burburtay sanadkii 1991.
Culimada Soomaaliyeed oo codsaday dibad-baxyo rabshad la'aan ah oo ka dhan ah filimka ka soo horjeeda Islaamka
2012-09-16 Caro ka dhalatay filim madax-banaan ayaa ku faaftay Soomaaliya, balse culimada diinta ayaa ugu baaqay kuwa mudaaharaadaya inay si nabad ah, waafaqsanna mabaadii'da Islaamka ay u difaacaan diinta.
Danjirihii Maraykanka oo lagu dilay Benghazi
2012-09-12 Afar qof oo uu ku jiro danjirihii Maraykanka ayaa ku dhintay weerar colaad wata oo lagu qaaday qunsuliyadda Maraykanka ee ku taal Benghazi.
Kooxda Xiriirka Caalamiga ah oo hoggaamiyayaasha Soomaalida ku boorriyay in ay ku socdaan jadwalka
2012-07-06 Hoggaamiyayaasha qaabaa'ilka Soomaalida waa in ay todobaadkan dhamaadkiisa doortaan Golaha Matala Deegaannada Qaranka si aan looga dib-dhicin jadwalka hadda daggsan
Somaliland oo ka qayb galaysa shirka London ee lagaga hadlayo arrimaha Soomaaliya
2012-02-09 Markii u horreysay in ka badan muddo 20 sano ah, ismaamul goboleedku wuxuu diri doonaa wakiilo si ay qayb uga noqdaan 40 dawladood si looga wada hadlo nabadgalyada iyo deganaanshaha gobolka.
2012-02-08 Dadka siyaasadda Soomaalida gorfeeya iyo hoggaamiyayaasha bulshada rayidka ah ayaa soo dhaweeyay hadalka ka soo yeeray Kooxda ee ku baaqayay soo afjaridda xilliga kala-guurka sidii ballantu ahayd iyo cambaarayntooda ku aaddan al-Shabaab.
2012-01-12 Wakiillada gobolka ayaa Jibuuti ugu kulmay in ay ka wada hadlaan sidii loola dagallami lahaa al-Shabaab gobolkana loogu soo celin lahaanabad waarta